Iskama indha tiri karno talooyinka Berlusconi” – Fassone oo u duurxulay Montella – Gool FM
Iskama indha tiri karno talooyinka Berlusconi” – Fassone oo u duurxulay Montella
(Milano) 21 Okt 2017 – Maareeyaha Guud ee AC Milan jaalle Marco Fassone ayaa qirtay inuu weli soo woco oo uu dhaliilo milkiilhii hore ee Milan ee Silvio Berlusconi isagoo yiri “ma aha inaannu wax kasta ku raacno.”
Berlusconi ayaa maamulayay kooxda Milan muddo 30 sano ah kahor intii aanu horraantuu sanadkan ka iibinin Yonghong Li iyadoo uu Fassone yahay ninka gacanta ku haya howl-maalmeedka naadiga iyadoo uu wehliyo maareeyaha isboortiga ee Massimiliano Mirabelli.
“Wuxuu Milan maamulayay 30 sano, suurtagalna ma aha in la iska indha tiro, qof naga mid ihina middaa dooni maayo, xitaa haddii ay wax iska bedeleen sida loo maareeyo naadi kubadda cagta ah,” ayuu Fassone u sheegay La Stampa.
Raysal Wasaarihii hore ee Talyaaniga Minister Berlusconi, oo haatan markale doorasho u taagan ayaa si aan qarsoodi ahayn u dhaliilay qaabka uu kooxda u wado macallinka Vincenzo Montella oo uu ku dhaliilay dhookhyadiisa dhanka taatikada.
“Ilaa haatan wuu isoo wacaa isagoo talooyin i siiya, dhaliishiisu waa muhim, xitaa aynaan mar kasta ku raacaynin.” ayuu raaciyay Fassone oo uu warkiisu si ugu ekaan karo duurxul ku socda Montella.
TOOS u daawo: Barcelona vs Malaga - LIVE (Shaxda sugan)